Shiliana Bilaogera Miresaka Ny Korontana Ao Bolivia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Septambra 2017 1:56 GMT
Mampiasa ny lohan'ireo shiliana bilaogera ny zavatra mitranga ao Bolivia. Toy ny hazavain'i Tomás Bradanovic (ES) :
Resaka tsy fifankahazoan-kevitra goavana tsy voavahan'ny governemanta sy ny mpanohitra mba hahatakarana ny fomba fisainan'ny andaniny sy ny ankilany no fototry ny toedraharaha mahatsiravina atrehan'i Bolivia. Mitsara sy miasa amin'ny fomba diso ry zareo, ary izany no mahatonga ny firenena ho tavela toy ny mpangataka mitorevaka eo ambony volamena mivangongo. Raha manao fisainan-jazakely i Morales, tsy mahatakatra akory hoe isanandro izy dia manome hery ny fahavalony satria ny fampihenjanana ny tady politika no endrika tsara indrindra andrasan'ireo antoko mpanohitra.
Raha naka ny fomba fijery ara-toekarena, nanoratra momba ireo olana mampiasa loha an'i Bolivia ao anatin'ny tsenam-barotra Mercosur i Libardo Buitrago (ES) :
Ny fampidirana an'i Bolivia ho ao anatin'ny Tsena iombonan'ny any Atsmo, (Mercosur) ary ny fanombohana tahirimbola iray ho fanonerana an'i Orogoay sy Paragoay manoloana ny tsy fitoviana izay misy ao anatin'ilay fiombonana any amin'ny faritra no hibahana toerana mandritra ny fihaonan'ireo mpitondra fanjakana avy amin'ny Mercosur, izay hatao ny Alakamisy sy Zoma ao amin'ny tanàna Breziliana, Rio de Janeiro.
Faranany amin'ny fanazavàna hoe iray amin'ireo zavatra mampiasa loha an'i Bolivia ny fikarohana raikipohy hidirany ho isan'ny mpikambana ao amin'ny Mercosur no sady mihazona ihany koa ny maha-mpikambana azy ao anatin'ny Andean Community Nations (CAN).
Mandritra izany, nanoratra i Elena Cáceres tao anatin'ny ,El Morrocotudo (ES) momba ireo fianakaviana izay nandefa ny zanany hianatra tany amin'ireo anjerimanontolo Boliviana.
Niresaka tamin'ny ray aman-drenin'i Pereda izahay, izy ireo izay manana zanaka lahy mianatra psikolojia mandritra ny efatra taona any amin'ny ambaratonga ambony ao amin'ny firenena. Nilaza ry zareo fa “tsy sambany no nisy zavatra nitranga tahàka izao. Taona vitsy lasa izay, efa nisy toejavatra tsy misy hafa amin'izao nitranga tany, izay nibahanan-dry zareo ny arabe nandritra ny andro maro ary tsy naharenesanay vaovao mikasika azy.” Tena mampanahy tokoa izany ho anay ray aman-dreny. Na atao hoe miaraka amin'ireo namany mpiaraka mianatra aminy aza izy, tena atahoranay tokoa hoe noho ny resaka politika na olana sosialy (tsy manjo ireo tanora Shiliana izany), dia mbola ry zareo ihany no mitaty ny vokany.